Shixnadaha Apple Watch Series 7 ayaa bilaabmi doona badhtamaha Oktoobar sida uu qabo Prosser | Waxaan ka imid mac
Shixnadaha Apple Watch Series 7 ayaa bilaabmi doona badhtamaha Oktoobar sida uu qabo Prosser
Dood -hayaha Apple ee Jon Prosser, ayaa tilmaamaya in Apple Watch Series 7 oo lagu soo bandhigay moodooyinka iPhone 13, iPad mini iyo jiilka XNUMX -aad ee iPad wuxuu bilaabi doonaa dhoofinta badhtamaha bishaan Oktoobar in aan sii daynay dhowr saacadood ka hor.
Shaki la’aan, in aan la haynin taariikhda rasmiga ah ee saacadda cusubi tahay wax saamayn taban ku yeelan kara shirkadda lafteeda oo hoos u dhigi karta iibkeeda. Waa run in isticmaaleyaal badani doortaan inay iibsadaan Apple Watch Series 6 ama xitaa Taxanaha 5 waayo aan la helin qaabkii ugu dambeeyay ee la heli karo, laakiin guud ahaan waxa la raadinayo waa in la helo moodelkii ugu dambeeyay oo iibku saamayn karo haddii sugitaanku aad u dheeraado.
Bartamaha-Oktoobar waxay noqon doontaa waqti ku habboon in la bilaabo Apple Watch
Waana taas mareegaha Apple hadda calaamadda dhammaadka dayrta ayaa loo beddelay tii "Waa la heli karaa dayrtaan". Tani waa waxa kaliya ee aan arki karno markaan aadno si aan u daalacno taxanaha cusub ee Apple Watch 7. Dhab ahaantii maahan taariikh si rasmi ah loo calaamadeeyay, waxaa laga yaabaa inay tahay xilli hore, badhtamihii Oktoobar ama bisha soo socota, in kasta oo ay run tahay inaan hubno inay aad bay ugu dadaali doontaa in saacadaha suuqa lagu hayo sida ugu dhakhsaha badan.
Hadda oo ay la socoto daadinta Prosser, dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inuusan khalad ahayn iyo in kale Apple wuxuu ku bilaabmaa sida ugu dhaqsaha badan iibkaan. Oktoobar badiyaa waa bil muhiim u ah iibinta alaabada Apple maadaama kuwa aan dooran inay beddelaan iPhone, ay rajeynayaan inay beddelaan iPad -ka, Apple Watch ama xitaa Mac -kooda. bartamihii bishaan waxaan horey u haysannay The Apple Watch Series 7 oo diyaar u ah in la keydiyo oo loo diro dhammaan kuwa iyaga sugaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Shixnadaha Apple Watch Series 7 ayaa bilaabmi doona badhtamaha Oktoobar sida uu qabo Prosser
Apple Watch Series 6 ayaa gabaabsi ku ah Dukaanka Apple ka hor inta aan la bilaabin taxanaha 7
Oktoobar 28 Q4 shirkii natiijooyinka maaliyadeed